Ubuchwepheshe obusha bokukhiqiza imifino namazambane kwaxoxwa ngabo eStavropol Territory - Potato System Magazine
Ubuchwepheshe obusha bokukhiqiza imifino namazambane kwaxoxwa ngabo eStavropol Territory
Jul 28, 12:10
Edolobheni laseMikhailovsk, esifundeni sikaMasipala waseShpakovsky, ngesisekelo se-OOO OPKh Shpakovskoye, ngaphansi kobuholi boNgqongqoshe Wezolimo esifundeni, kwaba nomhlangano wokucobelelana ngolwazi nokuqeqeshwa odabeni lokuthi "I-Economics yokukhiqiza imifino namazambane kusetshenziswa ubuchwepheshe obusha eStavropol Territory."
Lo mhlangano ubuhanjelwe ochwepheshe abavela emnyangweni (eminyangweni) wezolimo wokuphathwa kwezifunda zikamasipala (izifunda zasemadolobheni) weStavropol Territory, izinhloko nezingcweti zezinhlangano zezolimo kanye nabalimi (abalimi) amapulazi, i-GKU "Stavropol SIKTs", igatsha leFederal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr", Inhlangano amapulazi we-Stavropol Territory. Sekukonke - cishe abantu abangama-50.
Ngaphambi kokuqala komcimbi, ababambiqhaza bajwayelana nobuchwepheshe bamazambane akhulayo, iklabishi elimhlophe ne-broccoli epulazini. Bafundile nenqubo yokuvuna u-anyanisi kanye nezaqathe zamatafula.
Kusukela ngonyaka we-2016, imboni ekhula yemifino ekhiqizwayo ikhombise ukwanda okukhulu ezindaweni ezihlwanyelwe ngamahektha ayizinkulungwane ezingama-4,7, noma ngo-58% kusukela ngo-2016. kulo nyaka, indawo ehlwanyelwe ingamahektare ayi-12,8. Kulokhu, isivuno esikhulu semikhiqizo yemifino sesikhuphuke safinyelela kumathani ayizinkulungwane ezingama-200, noma ngama-25% ngonyaka we-2016 ngokuqhathaniswa no-2019. Ngenxa yomsebenzi wokutshala imali, ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha kanye nezimo zezulu ezithandekayo, isivuno sikhuphuke ngo-18%.
Ingxenye yemibono yomcimbi ivulwe nguVladimir Sitnikov, onguNgqongqoshe Wezolimo eStavropol Territory.
- Namuhla, egameni likaHulumeni weStavropol Territory, uVladimir Vladimirov, sibambe umhlangano obekelwe ukwenziwa kwemifino namazambane. Ukuvunwa kwemifino namazambane okuqala sekuqalile futhi namhlanje kudingeka sidingide izingqinamba ezinzima abahlanganyeli bethu bemifino ababhekana nazo. Izinkinga ezinkulu yizikhundla ezibuthakathaka ekuhanjisweni kwemifino namazambane, lapho kusetshenzelwa futhi kuhanjiswa ngemikhiqizo yethu ngamaketanga okuthengisa. Yonke imikhakha yamapulazi ikhiqiza cishe amathani ayizinkulungwane ezingama-600 zemifino namazambane. Kulawa, ama-60% athengiswa emasimini, angama-33% aya ezitolo kanti angama-5% kuphela agcina ngamaketanga ezitolo emashalofini. Ngaphezu kwalokho, 1% yemifino namazambane kuthunyelwa ukuqhutshwa okujulile nokuthekelisa. Sifunde ukuthi singakhiqiza kanjani imikhiqizo esezingeni eliphakeme - manje kudingeka sisungule ukubambisana okuseduze ngamaketanga ethu okuthengisa, - kusho ungqongqoshe.
Izinyathelo zokusekelwa kwezwe nazo zaxoxwa kulomhlangano. Ukunxenxa ukukhiqizwa kwemifino namazambane kwesivuno sika-2019, ama-ruble ayizigidi ezingama-205 abelwe lo nyaka. Indawo exhaswe kuyo ingamahektare ayizinkulungwane eziyisithupha, noma ama-6,6% ayo yonke indawo yesifunda okuhlala kuyo imifino namazambane.
Enye isihloko esishisayo salomhlangano kwakuwukuxoxa ngamakhono okugcina. Ensimini yeStavropol Territory kunemifino engu-27 nemifino yamazambane enamathani ayizinkulungwane eziyi-126, noma ama-38% womkhiqizo wonke. Isabelo esiphansi semishini yokugcina kanye nokusebenza kwemikhiqizo kuvimbela umlimi wemifino iStavropol ukuthi angangeni "emakethe enkulu" yenethiwekhi nokuhweba okuthekelisa. Kulokhu, isifunda siyaqhubeka nokusebenzisa ukwesekwa koMbuso ukunxephezela ama-20% wezindleko zokwakha kanye nokwenziwa kabusha kwezindawo zokugcina. Njengengxenye yalokhu kusekelwa, kuhlelwa ukuthi kuthunyelwe enye indawo yokugcina izinto enomthamo wamathani ayizigidi eziyi-3,2 ebhizinisini lezolimo i-Agroinvest kwezolimo le-Ipatovsky GO manje kulo nyaka.
Ekupheleni kwengqungquthela, ababambiqhaza bakwazi ukushintshanisa ukubukwa neziphakamiso zokuthuthukisa imboni ekhulisa imifino esifundeni saseStavropol.
Source: UMnyango Wezolimo waseRussia Federation
Tags: amazambane akhulaizindlela zokuxhasa zikahulumeniI-Stavropol Territory